တကယ့်ကွာခြားချက်ပါတကား! | Martech Zone
တနင်္လာနေ့မတ်လ 12, 2007 အင်္ဂါနေ့, အောက်တိုဘာလ 4, 2011 Douglas Karr
ကျွန်ုပ်၏ဘလော့ဂ်ဆောင်ပုဒ်ကိုပြောင်းလဲသည့်အခါတိုင်းကျွန်ုပ်သည်ရှေ့စာမျက်နှာတွင်ကျွန်ုပ်၏ဓာတ်ပုံကိုချန်ထားခဲ့သည်။ ငါချန်ထားသည့်အခါတိုင်းကျွန်ုပ်သည်အီးမေးလ်များနှင့်မှတ်ချက်များကိုရရှိသည်။ ဘယ်တော့မှအဲဒီအမှားကိုကျွန်တော်ဘယ်တော့မှမကျူးလွန်ပါ။ ၎င်းသည်ဆိုက်သို့မည်သည့်တုံ့ပြန်မှုနှင့်ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးများဘယ်လောက်ယူဆောင်လာသည်ကိုကျွန်ုပ်အားစိတ်ဝင်စားစေသည်။ ငါ narcissistic မဟုတ်ပါဘူး, ငါ site ပေါ်တွင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ဓာတ်ပုံများတင်ရန်နှင့်အတူရုန်းကန်ကြဘူး သို့သော်၊ သင်တစ်ခါမှမမြင်ဖူးသောသူနှင့်ဆက်ဆံရေးတည်ဆောက်ရန်မည်မျှခက်ခဲကြောင်းကျွန်ုပ်လုံးဝအသိအမှတ်ပြုသည်။
ဘလော့ဂ်များသည်စကားပြောဆိုမှုများဖြစ်လျှင်သင်မမြင်နိုင်သောသူနှင့်သင်မည်သို့စကားပြောမည်နည်း။ ကျွန်ုပ်ပြုံးနေသည့်ခွက်ကိုခေါင်းစီးတွင်မထည့်သွင်းမီ၊ ထို site သည်ယေဘူယျအားဖြင့်ကြည့်ရသည်။ ပြုံးနေသည့်မျက်နှာတစ်ခုသည်ဘလော့ဂ်၏တိုးတက်မှုအပေါ်မည်မျှသက်ရောက်မှုရှိသည်ကိုကျွန်ုပ်တွေးမိသည်။ အကယ်စင်စစ်သူကအချို့သက်ရောက်မှုရှိပါတယ်။
ငါကော်လိုရာဒို၊ ဒင်းဗားမြို့မှာ dot com တစ်ခုလုပ်နေတုန်းအထက်ဖော်ပြပါပုံရိပ်ကိုလွန်ခဲ့တဲ့ ၄ နှစ်လောက်ကရိုက်ယူခဲ့ပါတယ်။ ငါအရမ်းကြောက်စရာကောင်းပြီးဒီကြောက်စရာကောင်းတဲ့ဓာတ်ပုံထက်ပိုပြီးပျော့ပြောင်းပြီးနူးညံ့တယ်။ ထိုဓာတ်ပုံဆရာတွင်အရည်အချင်းများစွာရှိသည်။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်ဆိုက်ကိုခဏတာစောင့်နေစေမည့်ရိုက်ချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ သင်တန်းမဟုတ်ရင်ငါ (သစ်တော်သီးထက်အခြား) ပုံသဏ္backာန်ပြန်ရ။ လူတွေအကြောင်းကျွန်တော်ရယ်ပြီးမော်တော်ဆိုင်ကယ်ကိုပြေးဖို့စက်ဘီးကိုစီးရမယ်ဆိုရင် Mr. Universe ပဲ ပီစီနှင့်ညနက်ပိုင်းပရိုဂရမ်းမင်းတို့၏ကျန်းမာသောဘဝပုံစံကိုပေးဖို့သိပ္ပံပညာသည်ကျွန်ုပ်တို့နှင့်အမီလိုက်နိုင်မည်မဟုတ်လော။
မတ်လ 12, 2007 မှာ 7: 46 pm တွင်
(ယခုတွင်ကြော်ငြာ link သည်ရိုးရှင်းသောစာမျက်နှာသို့သွားပြီး၎င်းသည်ငါ့ကိုမှန်ကန်သောစာမျက်နှာသို့ပို့လိမ့်မည်ဟုပြောပါသည်။ ၎င်းအစား၎င်းသည်သူ့ဟာသူပြန်လည်တင်ခြင်းသာဖြစ်သည်။ Mac ပြproblemနာလား?)
မတ်လ 12, 2007 မှာ 7: 54 pm တွင်
သတ်မှတ်ထားတဲ့! ဒါဟာလုံးဝလုံးဝဖြစ်ခဲ့သည် ကြောက်မက်ဘွယ်သော ငါရေးသားခဲ့သည်နှင့်စမ်းသပ်ခဲ့ပါဘူးသောကုဒ် redirect ။
မတ်လ 24, 2007 မှာ 4: 50 pm တွင်
ဟုတ်ကဲ့။ အခုအလုပ်လုပ်တယ် သင်၏“ re-direct page” တွင်“ not” ကိုထည့်ချင်နိုင်သည်
အကယ်၍ စာမျက်နှာ ၅ စက္ကန့်အကြာတွင် load လုပ်ပါကဤနေရာတွင်နှိပ်ပါ။
မတ်လ 24, 2007 မှာ 4: 55 pm တွင်
မတ်လ 12, 2007 မှာ 10: 17 pm တွင်
သင့်ရဲ့ "ခွက်" ကိုနာမည်အပြောင်းအလဲရှိရင်တောင်မှအဲဒီကိုလာရတာအဆင်ပြေမှာပါ။
မတ်လ 12, 2007 မှာ 10: 20 pm တွင်
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဒါကငါသေချာတာပေါ့။ အားလုံးကြိုဆိုကြသည် ... ယုတ်သောသူတို့ကိုမှလွဲ။ !
မတ်လ 13, 2007 မှာ 9: 09 AM
ငါ 'ဝတ်စုံကိုချွတ်ပြီးမင်းအရင်ကလုပ်ခဲ့ဖူးတဲ့ jovial image ကိုပြန်သွားပါ' လို့ပြောတော့မယ်၊ ပြီးတော့ငါစဉ်းစားမိတယ်၊
အိုကေ၊ ငါတို့နည်းပညာနှင့်စျေးကွက်အကြောင်းပြောနေသည့်အခြားလူတစ်ယောက်ကိုတကယ်လိုအပ်သလား။ သို့သျောလညျး, ငါတို့ကယ့်ကိုဆွယ်တာအင်္ကျီထဲမှာ slacker ကနေနည်းပညာနှင့်စျေးကွက်ရှာဖွေရေး (pic ဟောင်း) အကြောင်းကိုဖတ်ချင်ပါသလား?
ဒါဆိုငါတို့ဘာလုပ်ကြမလဲ သင်ရယ်မောသောပထမပုံနှင့်ဒုတိယပုံကိုပေါင်းစပ်ရန်လိုအပ်သည်။ “ Friendly / Funny, non-stuffy, professional professional” ကြည့်ပြီးခံစားကြည့်ပါ။
ဒါပေမယ့်ဟေး၊ မင်းကမင်းရဲ့ခေါ်သံပဲ၊ မင်းခေါင်းစီးမှာ headshot ကိုသုံးတဲ့အတွက်ငါထက်ပိုပြီးသတ္တိကောင်းနေတုန်းပဲ။ (ငါပြန်လည်ပြုပြင်မွမ်းမံသည်အထိကျွန်ုပ်၏လုံခြုံသော ambigram header ကိုကပ်ထားမည်။ ) 😉
မတ်လ 13, 2007 မှာ 10: 55 AM
အိုကေ၊ ဒီစိတ်ကိုသတိရပါ၊ သူ့ခေါင်းထဲမှာကာတွန်းပါတဲ့ကောင်လေးတစ်ယောက်ဆီကလာတာ။ ဒါပေမယ့်ဝီလျံလိုပဲငါရယ်ရတာဒူးပဲ။ သို့သော်ဝီလျံနှင့်မတူသည်မှာကျွန်ုပ်သည်နည်းပညာနှင့်စျေးကွက်ရှာဖွေခြင်းကိုဆွယ်တာတစ်ထည်မှလိုချင်သည်
မတ်လ 14, 2007 မှာ 6: 27 pm တွင်
မတ်လ 13, 2007 မှာ 11: 15 AM
Tony's Vote: ရယ်မောသံ။
အကြှနျုပျ၏မဲပေး: ရယ်မော Doug ။
တိုနီ - ကျွန်ုပ်၏ဘလော့ဂ်ကိုယခုကောင်းစွာသိရှိပြီးဖြစ်သည်။ Robert Hruzek (middleszonemusings.com) ပြောသည့်အတိုင်းသင့် SOAP ကိုအသုံးပြုနေသည်။ ဒီတစ်ခုလုပ်နေတာအဖြစ်လွယ်ကူသောအလုပ်အကြောင်းပါ! (ကုထုံးလုပ်ငန်း၌လတစ်လဖြစ်သင့်သည်)
မတ်လ 14, 2007 မှာ 4: 58 pm တွင်
ဘယ်အချိန်မှာသူကအစွန်းရောက် status ကိုရောက်ရှိသလဲ?
မတ်လ 14, 2007 မှာ 6: 26 pm တွင်
ငါ့မှာကြောင်တစ်ကောင်မှမရှိဘူး။ ကျွန်တော့်မှာ Cooper Russell ဆိုတဲ့ဂျက်ရပ်စယ်လ်ရှိပြီးအဲဒီကြောင်တွေအားလုံးကိုလိုက်ရှာသတ်ပစ်လိုက်တယ်။ 🙁
မတ်လ 14, 2007 မှာ 7: 05 pm တွင်
အပြုံးတွေနဲ့ကြောင်တွေအကြောင်းပြောတာအားလုံးငါ့ဆီရောက်လာတယ်။ LOL ကိုသွားတဲ့လမ်းတစ်ဝက်လောက်မှာ WinExtra mascot ရဲ့ sidebar widget ကိုပေါင်းထည့်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။